उहाँकाे स्तुति गर्नुमा हामीलाई फाईदा बन्छ। – EL-Shaddai Family Daily Bread
Home Channels Daily Bread उहाँकाे स्तुति गर्नुमा हामीलाई फाईदा बन्छ।
मे ९, शनिबार
..उहाँको नामको स्तुति गाओ; किनभने यो मनोहर छ।भजन १३५:३
दाऊद राजाकाे याे बानी थिए, उसले सबै जितमा परमेश्वरलाई निरन्तर स्तुति गरिरहन्थे र हारेकाे समयमा परमेश्वरकाे सामु पश्चतापि बन्थे त्यसैले परमेश्वरले दाऊदलाई सधैकाे निम्ति सम्झना गरिरहनु भएकाे छ । परमेश्वरले हामीलाई अाफनै स्वरूपमा बनाएर यस पृथ्वीका सबै प्राणी माथि सर्वश्रेष्ठता बनाँउनुकाे पछि याे छ; हामीलाई दिएकाे याे अमुल्य अात्माले परमेश्वरसँग सङ्गति गराेस र उहाँकाे अचम्म कामहरू प्रति स्तुति, प्रशंसा द्वारा महिमा दिनसकाैं भनेर हाे। स्तुति, प्रशंसा हाम्राे जीवनमा सजिलै निस्कन्दैन, दुई कारणले मानिसहरूले यस संसारमा स्तुति प्रशंसा गरिरहेका पाउँछौं । (१) यदि कुनै मान्छेले कसैबाट अाफनाे जीवनमा भला हुने काम गरेकाे छ भने, उसले त्यस ब्यक्तिकाे वर्णन रूपी स्तुति, प्रशंसा गर्छ। (२) थाेरै मानिसहरू छन जसले अाफनाे जिवनमा ईश्वरलाई प्राथमिकता दिन्छ र जीवन जिउनुकाे कारण ईश्वरलाई महत्व दिन्छ र ईश्वरकाे स्तुति प्रशंसा गर्न रूचाउँछ । बाईबलमा हामी उत्पति पुस्तक देखि पढिहेर्दा शुरूमा हाबिलले परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रशंसा स्वरूपमा पहिलाे जन्मेकाे बिना खाेटकाे पाठाे बलि चढाँउछ । परमेश्वर खुसि भएर ग्रहण गर्नुहुन्छ । (उत्पति ४:४) यसरी नै पुरानाे नियममा प्रभुकाे हरेक प्रिय जनहरूले मेम्नाकाे बलिदान द्वारा प्रभुकाे काम र नामकाे प्रशंसा गरेकाे छन। परमेश्वरकाे दृष्टमा अाब्रहाम एक विश्वासयाेग्य व्यक्तिले पनि धेरै पटक परमेश्वरलाई मेम्ना बलिदान द्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएकाे पाँउछाै। यही क्रममा जब ईस्त्राएलीहरू जब मिस्त्रबाट छुटकारा पाए तब त्यहा पहिलाे पटक परमेश्वरकाे महानता र उहाँकाे उद्धारकाे याेजनालाई सम्झन्दै मरियम र अरू स्त्रीहरू मिलेर नाच र स्तुति द्वारा प्रशंसा, धन्यवाद दिएकाे पाँउछाै। (प्रस्थान १५:२१,२१) परमेश्वरकाे दृष्टमा दाऊद मात्र यस्ताे व्यक्ति हाे जाे सानै दखि विणा बजाएर परमेश्वरकाे स्तुति गर्थे र जीवन भरि नै उसले परमेश्वरकाे नामकाे स्तुति प्रशंसा गरिरहे । उसकाे जिवनकाे हरेक हारमा उसले प्रार्थना र पश्चताप गरे अनि हरेक जितमा धन्यवाद र उहाँकाे प्रशंसा गरे, यसकारण त प्रभुले मन अनुसारकाे मान्छे भन्नुभयाे र दाऊदसँग परमेश्वरले वाचा बान्नुभयाे ।
अनि हारूनकी दिदी मरियम भविष्यवक्तिनीले आफ्नो हातमा एउटा खैंजड़ी लिइन्; अनि सबै स्त्रीहरू खैंजड़ीहरू लिएर र नाच्दै-नाच्दै तिनको पछि-पछि लागे। अनि मरियमले तिनीहरूलाई जवाफ दिइन्:“परमप्रभुका निम्ति गाओ; किनकि उहाँ अति नै उच्‍च हुनुभएको छ; घोड़ा र त्यसको सवारलाई उहाँले समुद्रभित्र फालिदिनुभएको छ।” ति मानिसहरूले प्रभुकाे स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद चढाउन सक्छ जसले सम्झन्छ कि उनीहरूकाे जिवनमा परमेश्वरबाट महान अनुग्रह पाएकाे महसुस गर्छ। केही व्यक्तिहरूलाई हेराै जसले परमेश्वरकाे प्रशंसा गरेका थिए; हारूणकाे दिदी मरियम (१ शमूएल १:१-१०), दाऊद (२ शमूएल २२:१-५१), शुलेमान (१ राजा ८:१४-२१)
किन गर्नुपर्छ हामीले उहाँकाे स्तुति ? के उहाँले हामीलाई यस्तै गरेकाे चाहानुहुन्छ? पवित्रतामा भएर हाम्राे प्रशंसा परमेश्वरले मन पराउँनुहुन्छ र स्वीकार्न हुन्छ चाहे त्याे स्तुति द्वारा हाेस, प्रार्थना द्वारा तर उहाँकाे सामु नम्र र चुर्ण बनिनु अवश्यक छ। हामीले गरेकाे प्रशंसा, प्रार्थना, धन्यवाद स्वर्गसम्म पुग्नेरहेछ अनि स्वर्गमा नि यही नमूना हामी पाउनु सक्छाै। अनि जब उहाँले त्यो पुस्तक लिनुभयो, तब ती चार जीवित प्राणीहरू र ती चौबीस प्राचीनहरू त्यस थुमाको अघिल्तिर घोप्टो परे, हरेकसँग वीणाहरू र धूपले भरिएका सुनका कचौराहरू थिए, जोचाहिँ पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरू हुन्। अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्य हुनुहुन्छ; किनकि तपाईं मारिनुभयो, र तपाईंले आफ्नै रगतद्वारा हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्‍वरका निम्ति किनेर छुटाउनुभएको छ । (१प्रकाश ५:८-१०)
हाम्राे प्रार्थना; हे प्रभु मलाई नि हजुरकाे प्रशंसा गर्न सिकाउनुहाेस; मेराे जीवन भर तपाईकाे प्रशंसा गरिरहन सकाैं । धन्यवाद छ प्रभु याे जीवन दिनुभयाे । धन्यवाद, अामेन
Previous articleआमा रोइरहेछिन
Next articleपवित्र र सत्य परमेश्वरलाई म धन्यवाद चढाउछु ।